Celebrities – Myanmar Scoop Arena
ဇနီးသည္ စုလဲ့၀င္း နဲ ့ကြာရွင္းလိုက္ျပီျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ က်ားေပါက္(ခ) ဟန္ထူးလြင္
သီခ်င္းေရးသူ၊ သီခ်င္း အသစ္ဖန္တီးသူ နဲ့ကိုယ္တိုင္ တီးခတ္တဲ့ အဆိုေတာ္ က်ားေပါက္လို့ပရိတ္သတ္ေတြ သိတဲ့ ဟန္ထူးလြင္ တစ္ေယာက္ သူ့ကိုယ္ပိုင္ Facebook အေကာင့္ ကေန သူ့ဇနီးသည္ နဲ့ကြာရွင္းလိုက္ျပီ ဆိုတဲ့ သတင္းကို
user | October 31, 2019
[UNICODE] နာမည်ကျော် အဆိုတော် အရီယားနား ဂရန်ဒီဟာ ဟောလိုးဝင်းကာလရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူမရဲ့ ဟောလိုးဝင်းဒီဇိုင်းကို အင်စတာဂရမ်ကနေတဆင့် ပရိတ်သတ်တွေဆီကို ချပြခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ ပရိတ်သတ်တွေကို အကြီးအကျယ် Shock ရသွားစေခဲ့တဲ့အထိ ပေါက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဖလော်ရီဒါဖွား ဂရန်ဒီဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The
မအေးသောင်းနဲ့အတူတွဲပြီး သရုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
user | October 30, 2019
[Unicode] မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများလာပြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ သူ့ရဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်ကို ပရိသတ်တွေအတွက် ထုတ်ဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ လတ်တလောမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးသောင်းနဲ့အတူ Story Board Movie Studio မှာ ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုတာအပြင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို
Film to act stops talking big Ayar
user | August 19, 2019
The comedian clown giant since many fans and video film, asafamiliar character seen. Without massive enough to feel like something big is involved in virtually every
The fans dark image captured children andaphoto model, actress, dozens of high paying fans love an artist. Her impressive outline would seem to be quite popular
user | August 15, 2019
Today, the resultant film solar and melodious standard attitudes do not match the product of breaking news audiences are most surprised. Were originally announced in solar Grinds melodious
user | August 6, 2019
Hollywood action actor Dwayne Johnson (The Rock) came together foralong time girlfriend, 34-year-old Lauren Xi Yang has been married (Lauren Hashian). The wedding was held last
user | August 5, 2019
Famous actor Reeves film “The Matrix was involved with the menu, is expected to produce the fourth film announced on Thursday (August 20). The film’s final ski (Lana